जकरिया9ERV-NE - अन्य - Bible Gateway
जकरिया 8जकरिया 10
जकरिया9Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
अन्य जातिहरूको विरूद्ध न्याय
9 एउटा दुःखपूर्ण समचार यो परमप्रभुको वचन हद्रक देशको अनि त्यसको राजधानी दमीशकको बिषयमा छ, मानिसहरू अनि सबै इस्राएली कुलहरूको आँखाहरू परमप्रभुमाथि छन्।2यो समचार हद्रकको सिमाना हमातका निम्ति हो अनि सोर र सीदोनका निम्ति पनि हो। यद्यपि तिनीहरू ज्ञानी छन्।3सोर एउटा किल्ला जस्तैछ। त्यहाँ मानिसहरूले चाँदी यति धेरै जम्मा गरेका छन् त्यो धुलो बराबर छ, अनि सुन माटो समान छ।4तर परमप्रभुले, यी सबै लिनुहुनेछ। उहाँले त्यसको धन-सम्पत्ति समुद्रमा फ्याँकि दिनुहुनेछ अनि यो शहर आगोद्वारा नष्ट गराइनेछ।
5 अश्कलोनमा बस्ने मानिसहरूले ती घटनाहरू देख्नेछन् अनि डराउँनेछन्। गाजाका मानिसहरू डरले काम्नेछन्। अनि एक्रोनका मानिसहरूको आशा सड्नेछ। गाजामा कुनैपनि राजा बाँच्नेछैन। अब एउटै मानिस पनि अश्कलोनमा रहने छैन।6अश्दोदका मानिसहरूलाई थाह छैन उनीहरूको पिता कोहुन्? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म अहंकारी पलिश्ती मानिसहरूलाई सम्पूर्ण रूपले नष्ट गरिदिनेछु।7म उसको मुखबाट रगत र उसको दाँतबाट घृणापूर्ण वस्तुहरू निकाल्नेछु। बाँचेका कुनैपनि पलिश्तीहरू हाम्रो जतिको एक अंग बन्नेछन्। तिनीहरू यहूदाको एटा नयाँ कुल हुनेछन्। अक्रोनका मानिसहरू हाम्रा मानिसका एक भाग हुनेछन्, यबूसीहरू बनिए जस्तै। 8 म शत्रुका सेनाहरूलाई यहाँबाट जान दिनेछैन, अब उसो म तिनीहरूलाई मेरा मानिसहरू प्रति चोट पुर्याउन दिनेछैन। मैले मेरा आँखाले देखेको छु कि बितेका दिनहरूमा मेरा मानिसहरूले कति कष्ट भोगेका छन्।”
9 हे सियोन, आनन्दित होऊ!
यरूशलेमका मानिसहरू खुसिले कराऊ!
हेर! तिमीहरूका राजा तिमीहरूकहाँ आइरहेछन्।
उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ अनि उहाँले मुक्ति ल्यउँनुहुन्छ।
उहाँ नम्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ गधामा चढेर आउँदै हुनुहुन्छ,
उहाँ एउटा जवान गधामा चढेर आउँदै हुनुहुन्छ।
10 राजा भन्नुहुन्छ, “मैले एप्रैममा रथहरू नष्ट पारें
अनि यरूशलेममा घोडसवारहरू ध्वंश पारें।
मैले युद्धमा प्रयोग गरेको धनुहरू नष्ट पारें।”
उहाँले जातिहरू सित शान्ति वार्ता गर्नुहुनेछ।
त्यो राजाले समुद्र देखि समुद्र सम्म राज्य गर्नुहुनेछ।
उनले नदी देखि पृथ्वीको अन्त भूमिसम्म राज्य गर्नुहुनेछ।
परमप्रभुले उहाँका मानिसहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ
11 यरूशलेम, तिमीसित मेरो रगतको करार रहेकोले
म रित्तो खाडलबाट तिम्रा कैदीहरूलाई मुक्त गरिदिनेछु।
12 तिमीहरूका किल्ला तर्फ जाऊ हे आशावादी कैदीहरू।
अब म तिमीहरूलाई भन्दैछु कि तिमीहरूले,
जति गुमाएकाछौ त्यसको दुइगुणा ज्यादा,
म तिमीहरूलाई दिनेछु।
13 यहूदा, म तिमीलाई धनु जस्तै प्रयोग गर्नेछु।
एप्रैम म तिमीलाई काँड जस्तै प्रयोग गर्नेछु।
सियोन, म तिमीलाई युनानीहरू बिरूद्ध
युद्धको बलियो तलवार जस्तै प्रयोग गर्नेछु।
14 परमप्रभु तिनीहरू अघि प्रकट हुनुहुनेछ
अनि आफ्नो काँड बिजुली चम्के जस्तै चलाउँनु हुनेछ।
परमप्रभु परमेशवरले तुरही बजाउँनुहुनेछ
अनि सेनाहरू मरुभूमिमा आँधिजस्तै अघाडी बढ्नेछन्।
15 सर्वशक्तिमान परमप्रभुले तिनीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ।
सैनिकहरूले घुँयेत्रो र ढुङ्गाको प्रयोग गरेर शत्रुहरूलाई पराजित गर्नेछन्।
उनीहरूले आफ्ना शत्रुहरूका रगत बगाउनेछन्,
यो दाखरस जस्तै बग्नेछ।
यो वेदीको कुना-कुनामा फ्याँकिएको रगत जस्तै हुनेछ।
16 त्यससमय, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले
उहाँका मानिसहरूलाई बचाउँनु हुनेछ,
जसरी गोठालोले आफ्ना भेंडा़हरूलाई बचाउँ छ।
तिनीहरू उहाँको निम्ति अत्यन्तै मूल्यवान हुनेछन्।
त्यो उहाँको हातमा चम्कने रत्न जस्तै हुनेछ।
17 प्रत्येक चिज असल अनि सुन्दर हुनेछन्।
त्यहाँ आश्चर्य चकित बाली कटनी हुनेछ।
त्यो केवल अन्न र दाखरसको नभएर
नयाँ केटा-केटीहरूको हुनेछ।